Dôme RTA Ankorondrano :: Feno tolotra tsy nampoizina ny «Ambony Ambany» • AoRaha
Dôme RTA Ankorondrano Feno tolotra tsy nampoizina ny «Ambony Ambany»
Re manakoako ny mozika avy tao amin’ny Dôme Rta Ankorondrano, toerana nandray ny lanonana famaranana ny “Ambony Ambany”, ny sabotsy lasa teo. Saika tafaray teny an-toerana avokoa ireo mpankafy ny dihy an-tanàn-dehibe. Tarika sy vondrona mpandihy maherin’ny roanjato avy teto an-toerana sy maherin’ny dimampolo avy tany ivelany no tonga nanome voninahitra ny lanonana.
Nangotraka ny seho. Tsy nanavahana ireo mpandray anjara fa hita teny avokoa na ireo kilonga sy tarika vao sambany misedra sehatra goavana sy iraisam-pirenena, na ireo efa matihanina sy kalaza hatrany ampitan-dranomasina any. Vao migadona tao an-toerana, indreo ireo mpandihy samy maka ny toerana mety amin’ izy ireo hanomanomanana ny fiakarana an-dampihazo. Amboarina avokoa na ny fianjaika na ny haingon-tava ,izay entina hanomezana ny raitra indrindra sy hampi- ainana ireo mpanatrika ny fanahin’ny soradihy.
“Natahotra aloha izahay teny am-piandohana, fa hitanay fa tena nankafy ny mpijery. Zava-baovao rahateo no natolotra ka nitolagaga izy ireo. Manantena ny mbola handray njara amin’ny andiany manaraka izahay, anio aloha efa nisy sahady ireo maniry hiara-miasa”, hoy ny tarika Miara-Dihy.
Isan’ny niavahan’ny tolotra “Ambony Ambany” tamin’ity andiany 2019 ity ny fandraisana anjaran’ireo kilonga avy tao amin’ny sekoly fampianarana dihy “Blast’in Kids” avy any Toamasina. Izy ireo rahateo no nandrombaka ny fankasitrahana manokana avy tamin’ny mpikarakara. “Notolorana ity fankasitrahana ity izy ireo satria nitondra ainga vao ho an’ny hetsika fa indrindra ho an’ny tontolon’ny dihy eto amintsika”, hoy ny mpikarakara teo am-panolorana ny loka. Sehatra iraisam-pirenena voalohany kosa ity ho an’ireo ankizy, ka hiezaka izy ireo ny handray anjara amin’ny hetsika manaraka. Hafa noho ny hafa ihany koa ny nahita ireo mpitendry avy any ampitan-dranomasina izay nahitana olona manana fahasembanana teo amin’ny tanany. Tsy ambakan’ireo manan-talenta ikoizana izy ireo.
Fanadinana fihodinana faharoa :: Efa nalefa avokoa ireo laza adina ho an’ny bakalorea manokana